Sheekh Cabdiqani Sheekh Axmed - Wikipedia
Sheekh Cabdiqani Sheekh Axmed
Sheekh Cabdiqani Sheekh Axmed Aadan Allaha u naxariistee waa Sheekh caalami ah oo ka baxay umadda Soomaaliyeed. Waa horseed ka mid ah horseedada camalka Islaamiga ee casrigan, oo noloshiisa ku dhamaystay u adeegidda Diinta Islaamka.Sheekh Cabdiqani wuxuu ka mid ahaa culimadii ugu horeeyay ee dacwada Islaamiga ee casrigan kaalinta wayn ka qaatay, wuxuuna ka mid ahaa horseedka baraaruga Islaamiga ee Geeska Afrika ee Soomaalidu degto. Sheekh Cabdiqani iyo saaxiibkiis Sheekh Maxamed Garyare waa culimadii dhagaxa u dhigay madrasada Ikhwaaniga ee Geeska Afrika ka hanaqaaday, gadaashiina magaca Islaax ku caanbaxday.
Taariikh nololeedka[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Sheekh Cabdiqani Sh. Axmed Aadan waxa uu ku dhashay gobolka Bakool, qiyaastii sanadkii 1931, halkaa ayuuuna kusoo barbaaray quraankana ku xifdiyey, kadibna waxa uu bilaabay waxbarashadii xalaaqaadka masaajidda, waxaana uu u soo wareegay magaalada Muqdisho oo uu ka sii waday waxbarashadiisii ilaa uu ka noqdo caalim ka mid ah culimada Soomaaliyeed.
Shiikhu waxa uu u safray dalka masar sanadkii 1951 si uu cilmi uga soo kororsado wuxuuna galay jaamacada al-Azhar al-shariif kuliyada shareecada, waxaana uu ka qalin jebiyey kuliyadaasi sanadku markuu ahaa 1957, dalkana wuxuu ku soo laabtay isla sanadkaa wuxuuna kamid noqday shaqaalaha wasaaradii waxbarashada iyo barbaarinta, wuxuuna ka mid noqday aqoonyahanka Soomaaliyeed uu ugu horeeyay ee macalin ka noqda machadka jaamiciga ee Muqdisho, oo bilowgii toddobaatanaadkii noqday jaamacadii umadda Soomaaliyeed.
Shiikhu kadib wuxuu u wareegay Wasaaradii Cadaaladda iyo Arimaha Diinta isagoo hawlo kala duwan ka soo qabtay wasaaradaas. wuxuu noqday lataliyaha maxkamada sare ee dalka, ka dibna wasiir 1970-1975.
Shiikha sanadkii 1970 waxaa loo magacaabay wasiirka Cadaalada iyo Arimaha Diinta, haseyeeshee wuu sii wadi waayey howshaas waayo wuxuu ku adadkaa mabaadid`a islaamka oo aan aad ugu cuntamin xilligaasi dawladdii jirtay iyo mawaaqiftiisii xagga dacwada islaamka isagoo ku mutay arinkaa in la xiro.
Sheekha Alla ha unaxariistee markii laga soo daayey xabsiga waxa uu sii waday macalinimadii jaamacadii umadda kuliyadii qaanuunka qeybteedii shareecada islaamka.
Sanadka markuu ahaa 1982kii Sheekha Alla ha u naxariistee waxa uu u wareegay dalka Kuweyt halkaas ayuuna ka noqday cilmi baare Mawsuucada Fiqhiga Islaamka ee kuweyt, halkaas ayuuna ka shaqeynaayey ilaa uu ka geeriyooday Alla ha u naxariistee jimcihii 17/8/2007 .
Media:Doorkiisii xagga Dacwada Islaamka
Sheekh Cabdiqani wuxuu ka mid ahaa culimadii Soomaaliyeed eee dadaalka wayn u galay yagleelidda baraarugga Islaamka, laga bilaabo markuu dalka ku soo noqday dabayaaqadii kontonaadka. Sheekh Cabdiqani waxa uu aad ugu firfircoonaa fidinta dacwada Islaamka, wuxuuna ka mid ahaa culimadii ugu horeeyay ee keenay, kuna fidiyay fikirka ikhwaaniga Geeska Afrika. wuxuuna sheekhu macruuf ku ahaa inuu difaaco Islaamka iyo mabaadi`diisa.
Sheekh Cabdiqani waa aasaasihii munadamada Islaamiga ee Al-Nahda 1967. Munadamadani waxay kaalin fiican ka qaadatay aasaaska baraarugga islaamka ee gobolkan geeska Afrika, iyo xoojinta kaalinta luqadda carabiga ee Soomaaliya. Sheekh Cabdiqani wuxuu noqday masuulkii ugu horeeyay ee munadamadan, oo la joojiyay markii xukunka milaterigu la wareegay Soomaaliya Oktoobar 1969.
Sheekh Cabdiqani wuxuu lafdhabar ka ahaa abaabuliddii tafsiirka Quraanka ee Sheekh Maxamed Macalin - Alle haw naxariistee- uu ka akhriyi jiray masaajidka maqaamka. Tafsiirkan oo baraaruga Islaamka ee Soomaaliya, iyo guud ahaanba geeska Afrika wax wayn ku soo kordhiyay.
Markii la isku dayay in fikirka shuuciga dalka lagu fidiyo, Sheekhu wuxuu ka mid ahaa culimadii u hawlgalay ka hortegidda arintaas. Waliba isagoo ka faa`iidaysanaya masuuliyaddii wasaaradda cadaaladda iyo arimaha diinta ee uu hayay. mawaaqiftiisa wadaniga iyo islaamiga ah ayaana keentay in xilkii wasiirnimo laga qaado, xabsigana loo taxaabo.
Sheekha Allaha u naxariistee noloshiisii dheereyd waxaa lagu yiqiin dhowrsanaan iyo firfircooni xaga diinta iyo dacwada islaamka, sidoo kale waxaa lagu yiqiinay mawaaqif wadaniyadeed.
Sh Cabdiqani waxa uu ahaa nin xaqa jecel dulmigana neceb taasina waxay keentay in ay isaga horyimaadaan dawladdii Kacaanka, hawlihii dawladdana looga qaaday, looguna bedelay xabsi.
Sheekh Cabdiqani Sh. Axmed Aadan, Ilaahay haw naxariisto, oo ha u nuuro xabaasha; Samir iyo iimaan Alle haka siiyo dhamaan umadda muslimka ah, siiba Soomaalida, gaar ahaanna baraaruga Islaamka, ururka Islaax, iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka tegeyba.
inaa lillah waa in aa ileehi raajicuun
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Sheekh_Cabdiqani_Sheekh_Axmed&oldid=149997"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 20:05, 16 Nofeembar 2015.